Lovyaschie Onja | ny tsy manam-petra tontolo izao voarindra
Posted in tsy misy farany Space . fampiharana . fitaovana . zava-misy
tonga lohataona roa arivo sy sivy. ary, manidina foana, rahona eo aoriana, lavitra Indigo loko amin'ny lanitra,mampahatsiahy ny fifohazan'ny natiora sy ny antsitrika tany an-lavitra eny, in ny fomba hinting momba ny fahafahana Infinity ary manosika hanao, hoy izy ireo TO, dia tonga ny fotoana mba handray ny fiainana ALL.
Zavatra voalohany aloha ... Tsy manafina ny marina, lazaiko: Ankehitriny tsy maintsy indray hampianatra.
Amin'izao fampandrosoana, dia hanampy ny tena: prana, Shakti, cosmic Angovo, NATURAL olombelona izy.
toy izany, Ahoana no ny dia?
tena tsotra! Ara-ilaina ny hahatratra ny toe-, izay ny tsapan'ny, ny fomba mikoriana angovo noho ny tenan'i.
Eny tokoa, dia ampy ny mandinika ny ohatra tsotra: Raha vao tafarina tamin'ny vokatr'iny sakafo rehefa afaka kelikely azy ianao rastechenie. Vokatr'izany, dia kely ny sakafo fiovam-po (angovo henjana) dia nozaraina ho faritra rehetra amin'ny vatanao ao amin'ny fenitra mifanaraka amin'izany.
ary, ho toy ny fitsipika, amin'ny toe-javatra izany, maneho ny fiaraha-miory ianao teny toy ny: "tsara, Ankehitriny sakafo ".
Tsy sarotra ny mahita, fa ny sakafo, ho azo ekena ho voaray am-tsaina eo amin'ny vatana, Izany no mahatonga-draharaha. Ary ianareo, miaraka amin'ny fanampian'ny ny fahatsiarovan-tena mamorona toe-javatra, izay manomboka ny dingana.
Ny fomba mahazatra indrindra arivo - ny, amin'ny izay ny sakafo ara-nofo hisakana ny fiasan'ireny. Fa nahoana no hametra ny tenanao, ary mba hanomezana toky fa, Tsy fantatro ny fomba na inona na inona?
toy izany, afa-tsy izao tontolo izao misy ihany koa ny raharaha izao tontolo izao fihetseham. ary, fotsiny, noho izany fandriampahalemana, dia tonga toe-satiety, fahafenoan'ny, fahatsapana saturation. Ary amin 'izany izao tontolo izao fihetseham ao amin'ny toerana tena mampahazo aina ny tenany
izy ireo, izay eo am-pelan-pihetseham-po lehibe ny fifandraisana: mpanakanto, mpahay siansa sy ireo, izay aura gilded. toy izany!
Dia tsy haharitra ela teo amin'ny lohany mitsoka, sy ny fotoana tsy maintsy hihinana zavatra
NATURAL olombelona izy – mavitrika angovo, miaina ny fiainany! izany hoe IZY Io no fototra sy ny fiara hery rehetra misy eo amin'ny fiainana tsy ampy. tena fanatanterahana avy amin'Andriamanitra fitiavana. Tena foana izy-dia manangana, ary izay rehetra tsy maintsy atao - mba hanome ny Afaka manao izany. tsara, amin'ny ankapobeny, ny rehetra mahalala ny fomba WE NY toerana tena. Tatỳ aoriana no hojerentsika. Mino aho fa ny zava-drehetra mazava: replenishment ny angovo mitranga miavaka noho izany fihetseham ANJELY, ary ny fahazoan-dalana AZY ataovy ny fitantanana.
fa izany mahazo ampy - ny mila fotsiny ianao hamaky ny tenany ho toy izany hatraiza, fa amin'izany dia misy ny fihetseham-po saturation. Tena tsotra ...
Ao amin'ny fitsipika toy izany koa ny zava-mitranga sy ny ho-up hafa zavaboary (karazana angovo).
Shakti - tsy misy farany ranomasimbe toerana avy amin'Andriamanitra angovo, Zava-mamorona sy ny fahefana mpanatanteraka tsy manam-petra ranomasimbe avy amin'Andriamanitra fahatsiarovan-tena Shiva, sady toy ny andia-tafika tokana.
Shiva - iray amin'ireo faratampony ampy mpitovo Andriamanitra, ao amin'ny tsy manam-petra Space.
toerana angovo - amin 'ny fitsipika, ny endriny rehetra amin'ny hery dia ny fisehoan'ny endrika ity lehibe toerana angovo. Hitantsika iray tsara fanahy, mampifanaraka ny psycho, Tsy hahazo ny fihetseham-pony, ary aoka tsy tafiditra an-tena. Tsara mety amin'ny mpanakanto sy ho an'ireo rehetra izay manana famoronana matanjaka voalohany, ary afaka nijery ny herin'ny famoronana.
prana - ny herin 'ny fiainana, avy NATURAL LIVE ANJELY. Mazava ho azy fa, izy tsy manam-petra. dia na aiza na aiza, miditra na aiza na aiza. fomba iray ny jereo: Isika any ivelany, fitifirana solomaso, Perk, Tsy mijery ny lanitra, tsy masoandro, ihany koa, fa izany tsy mba nisy maso fahajambana, amin'ny alalan'ny mifantoka amin'ny lavitra 5-10 santimetatra amin'ny mason'ny. Tsy hahazo sata, izay ny filazana volamena "Sombin-kazo", mifindra erratically. Hanatrarana tapaka fanjakana - mahatsiaro izany fihetseham-po ka mitandrina izany. Raha toa ka afaka mihazona andro iray manontolo - ny andro ka ho faly amin'ny fahamarinana. Toy izany koa no ho faly amin'ny fahamarinana, raha afaka mahatsiaro izany fanjakana ka tafiditra aminy akory.
Raha tsy maintsy hanipy ny biolojika sakafo - mila tsy hifantoka amin'ny "sakafo" sy "tsy mandeha", ary mahatsapa, anao ny traikefa. Mila ho eo ny toetry ny avo angovo. Tsy voailika, fa mba hahazoana ireo fihetseham-po, dia mila hihinana zavatra. Izany no manao aho, sy ny habetsahan'ny sakafo dia hampihena rehefa mandeha ny fotoana.
Fa ny fanombohana dia ho ampy - tsipiriany bebe kokoa ao amin'ny toko manaraka ireto.
izany lohataona Ho ny famoahana boky lehibe iray cosmic Angovo, ary raha tsy mitehaka ny ary dia ho afaka hiditra amin'ny izany in akony -
dia ho eo amin'ny onja, izay hitondra anao amin'ny alalan'ny be pitsiny ny tsipirian'ilay ny Transition, ka dia, lovyaschie onja, Meet lohataona
onja... toerana manambara lohataona...
... Yeah ... sy I, angamba, pumped loatra ...
... sy ny feo, mifamatotra amin'ny tsirairay, malalaka amin'ny fihaingoana ny mifanaraka, Nankafizinay koa raha hita milaza, in mialoha ny fahaterahan'ny mozika vaovao ...
Iza no nanana ny fotoana - ka dia nihinana izy. ))
Amin'ity tranga ity isika dia miresaka momba ny maso tsotra.